NH4NO3 (amooniyam nitrate) + CH2 (Methylene) = H2O (biyo) + N2 (nitrojiin) + CO2 (carbon dioxide) | Isla'egta Falcelinta Kiimikada ee dheellitiran
NH4NO3 CH2 = H2O N2 CO2 | Isu dheellitirka Kiimikada
Methylene = kaarboon laba ogsaydh
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 3NH4MAYA3 + CH2 H 7H2O + 3N2 + CO2
Waa maxay xaalada falcelinta ee NH4NO3 (ammonium nitrate) ay kaga falceliso CH2 (Methylene)?
Sidee fal-celintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo N2 (nitrojiin) iyo CO2 (kaarbon dioxide)?
Dhacdada ka dib NH4NO3 (ammonium nitrate) waxay la falgashaa CH2 (Methylene)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 3NH4MAYA3 + CH2 H 7H2O + 3N2 + CO2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CH2 (Methylene)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee CH2 (Methylene)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CH2 (Methylene) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2O (Methylene)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2O (biyaha) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee N2 (Methylene)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh N2 (nitrogen) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CO2 (Methylene)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CO2 (kaarbon dioxide) badeecad ahaan?
Falcelinta NH4NO3 (amoni nitrat) la falgal CH2 (Methylen) soo saaro H2O (nước) iyo CO2 (Kaarboon dioxit)
Falcelinta soo saarta walaxda CH2 (Methylen) (Methylene)
2H2S + 3O2 H 2H2O + 2SO2 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 NH4MAYA2 H 2H2O + N2